भ्रष्टाचार छानबिन गर्ने ? लडाकु शिविरबाटै सुरु गरौँ – ओली — SuchanaKendra.Com
भ्रष्टाचार छानबिन गर्ने ? लडाकु शिविरबाटै सुरु गरौँ – ओली
काठमाडौं नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भ्रष्टाचारको छानबिन गर्ने भए लडाकुको शिविरबाटै गर्न सुझाव दिएका छन् । उनले केन्द्रीय कमिटीको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै यस्तो सुझाव दिएका हुन् ।
“क्यान्टोनमेन्टको भ्रष्टाचार, विगतको लुट, निजी सम्पत्ति कब्जालगायतका विषयमा छानबिन गर्नुपर्छ,” उनको भनाई थियो, “वाइडबडी, बालुवाटार जग्गा प्रकरण, सुन तस्करी कहिले भए ? संलग्न गठबन्धनकै नेताहरुलाई कारबाही गर्न सक्नुहुन्छ ? कि झुटो मुद्दा लगाएर विपक्षीलाई फसाउने षडयन्त्र हो ? ” उनले एमालेले देशभक्त, लोकतान्त्रिक र प्रगतिशील शक्तिको साथ लिएर प्रतिकार गर्ने बताए । एमसीसीको बारेमा किन बोल्न नसकेको ? तपाईंहरुकै पालामा सम्झौता भएको होइन ?,” उनको प्रश्न थियो, “ १६५ को मत विश्वासको मत लिँदा लिएको होइन ? किन पास गर्न नसकेको ? किन हामीलाई दोष दिएको ?”